KING STUDIO NE pool
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJohn & Gillian
Igumbi lestudio elikhanyayo kunye nelinemoya elinendawo yokungena yabucala, enomoya, ibhedi elingana nenkosi, ifriji, imicrowave, ichibi labucala kunye neendawo zokupaka ezitratweni.
Indawo ezolileyo kakhulu. Abanini bahlala kwindawo, kodwa indawo yokuhlala yeendwendwe yahluke ngokupheleleyo kwindlu enkulu, ngoko ke ubumfihlo bakho buqinisekisiwe. Iindwendwe zinokufikelela kwiqula lokuqubha kunye nedesika engafane isetyenziswe ngabanini.
4.92 · Izimvo eziyi-112
Kufuphi nolwandle lokuqubha, indawo yokuthenga kunye nesikhululo sebhasi. Ukuhamba ngokulula ukuhla kodwa kunokuba lucelomngeni lokuhamba. Imoto iya kuba ngcono. Imizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya eAirlie Beach (malunga ne-3km)
Umbuki zindwendwe ngu- John & Gillian
Siyakufumaneka ukuba siyafuneka ukuze sibe nalo naluphi na uncedo, nangona kunjalo ubumfihlo bakho bubalulekile kuthi
UJohn & Gillian yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cannonvale